Wararka Maanta: Sabti, Mar 15, 2008-Shirkii Wadamada Islaamka ee Senegal lagu qabtay oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya
Madaxdii Islaamka ee shirkaas ka qeybgashay ayaa waxay sheegeen in xaaladda Soomaaliya ay taagan tahay heer aan laga aamusi karin, waxayna ku baaqeen in laga shaqeeyo dib u soo celinta nabaddii Soomaaliya, sidoo kalena gacan laga geysto dib u dhiska dalka iyo gargaar bani’aadannimo oo lala gaaro dadka u baahan.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya oo shirkaas ka qeybgalay ayaa la sheegay in uu soo dhaweeyay go’aanka ay madaxda dalalka Islaamka ka qaateen Arrimaha Dalka Soomaaliya.
Xaaladda Soomaaliya ayaa mar kasta waxaa looga hadlaa shirar ay yeeshaan madaxda Ururrada ay Soomaaliya ka mid tahay, iyadoo gunaanadka shirarkaasina laga soo saaro baaqyo ku saabsan in wax laga qabto xaaladda Dalka Soomaaliya.
Waxaa xusid mudan in baaqyada laga soo saaro arrimaha Soomaaliya ay noqdaan kuwo aan dhaafin miiska wada hadalka ee shirka la qabtay, waxaana la xusuusan yahay in ay dhaceen shirar tiro dhaaf ah, kuwaasi oo qaarkood lagu qabtay xarunta Qaramada Midoobay ee New York, isla markaana noqday kuwo aan la fulin qodobadii ka soo baxay.
Soomaaliya ayaa muddo 17 sano ka badan waxay ku jirtaa xaalad fowdo iyo nidaam la’aan ah, iyadoo mudadaasna la sameeyay dhowr isku day oo la doonayo in Soomaaliya looga bixiyo dowlad la’aanta ay ku jirto.